मम खुबै मन पर्छ ? उच्च रक्तचापको सिकार हुनुहोला ! - AP Khabar
मम खुबै मन पर्छ ? उच्च रक्तचापको सिकार हुनुहोला !
AP Khabar२०७८ आश्विन २५, सोमबार (२ हप्ता अघि) ५४ पाठक संख्या
नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय खाजा हो मम । स्टिम वा फ्राई गरेर, भेज ननभेज मम हामी नेपाली स्वाद मानेर खान्छौ । तर स्वादमा सबैको मन जितेको ममले स्वास्थ्यमा त्यती नै प्रतिकुल असर पारीरहेको छ भन्ने कुरा हामीमा होस नै हुदैन ।
ममको अत्याधिक सेवनले स्वस्थ मानिसमा समेत उक्त रक्तचापको समस्या श्रृजना गर्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार, अत्यधिक मात्रामा फास्टफूड खाँदा युवामा उच्च रक्तचापको समस्या निकै बढिरहेको छ ।
रक्तचाप बढि भएकै कारण युवाअवस्थामै दिर्घकालीन रुपमा रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने औषधिको सेवन गर्न थुप्रै नेपालीहरु बाध्य छन् । रक्तचाप उच्च हुनुमा तनावपूर्ण जीवनशैली, अनियमित खानपान, फल र तरकारीको साटो मम जस्ता फास्टफूडको सेवन, चिल्लो र नूनिलो खानेकुरा खाने बानी, निष्क्रिय जीवनशैली आदी कारक हुन् ।
रक्तचाप सन्तुलनमा राख्नका लागि मम लगायतका फास्टफुड, जंक फुड कहिलेकाहीँ मात्र खाने गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा रक्तचापको परीक्षण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यस्थितिमा परिवर्तन आउनेबित्तिकै चिकित्सकको परामर्श लिइहाल्नुपर्छ ।